China Lactose Compounds ifektri nabakhiqizi | Y&R
Igama Lomkhiqizo: I-Lactose Complex
INOMBOLO YECAS. 63-42-3
Inhlanganisela yokumisa isifutho ehlanganisa u-85% I-Lactose Monohydrate kanye nesitashi sombila esingu-15%. Ithuthukiswa ngokucindezelwa okuqondile, futhi ihlanganisa uketshezi oluhle kakhulu, ukucindezelwa nokuhlakazeka.
I-Lactose kanye ne-Microcrystalline Cellulose Complex
Ngo-75% Alpha I-Lactose Monohydrate ye-Microcrystalline Cellulose kanye nengxube engu-25% yokomisa isifutho.Njengokugcwalisa kanye neLactose njengengcina ye-Microcrystalline Cellulos iyinhlanganisela ye-synergy.
Okwedlule: I-Lactose Monohydrate
Olandelayo: I-Sodium Ascorbyl Phosphate
I-Lactose Monohydrate 200 mesh